Umhlaba Hole Digger, Hole Machine Earth, Log Splitter - Dongheng Machinery
KINGER umhlaba auger drive yaphuhliswa ekuqaleni kweYantai Dongheng Machinery Co, Ltd. ukusekwa. Ukuza kuthi ga ngoku, sinamava amaninzi okuvelisa kunye nokuthengisa kule nkalo.Funda ngokugqithisileyo
I-KINGER cone log splitter yehlathi iguquguquka ukuba ifakwe kwisikhombi, i-skid steer, i-backhoe loader njl. Ikhuselekile kunokuba i-log log splitter njengesiqhelo. ukugawula imithi.Funda ngokugqithisileyo
UKUMKANI wabona intloko isebenzisa izinto ezikrwada ezikhethekileyo kunye nezixhobo zeplanethi, ezinokusebenza okuphezulu kunye nobomi benkonzo ende.Funda ngokugqithisileyo
Yantai Dongheng oomatshini Co., Ltd.
Umnxeba oshushu weyure
Ixabiso eliphezulu lokusebenza
Inkonzo ekwi-Intanethi yeeyure ezingama-24
Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd. yasekwa ngo-2010 kwaye waba kwindawo ephambili excavator attachments oomatshini ngesantya ekhawulezayo. Inkampani yethu iphumelele i-ISO9001: 2015 kunye ne-CE. Singamashishini aphakamileyo obuchwephesha besizwe kunye nomsebenzi, ubukhethekileyo kunye nokuyila. Inkampani yethu inamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Ukuza kuthi ga ngoku, siye safumana amalungelo awodwa omenzi wechiza ngaphezulu kwama-30. Oko kwenza ukuba i-Dongheng ibe sisikhundla esiphambili kushishino loomatshini bokwakha baseTshayina.
IYantai Dongheng Machinery Co., Ltd. izibophelele kwi-R & D, ekwenziweni nasekuthengiseni isincamathelisi se-excavator kulwakhiwo, ezolimo kunye noomatshini bamahlathi. I-KINGER eyintloko yeshishini ine-Mini excavator, Earth auger, Log splitter, Log grapple, Saw head, Mixer bucket, Mixer bowl, Hedge trimmer, Chain trencher, Tree shear, Stump planer, Hydraulic hammer, Quick coupler, brushing swewing and other construction machines uncamathiselo.
Imveliso yethu isebenzisa ubuchwephesha obuphezulu kunye nobutsha, busetyenziswa ngezinto ezilungileyo kwaye zixhaswe ziimveliso ezahlukeneyo zokuhlola kunye nokuvavanya ukuqinisekisa ukuba umgangatho uzinzile kunye nokusebenza ngokugqwesileyo. Ukongeza, siqinisekisiwe ngumboneleli wegolide kwiAlibaba.Sinokuhambisa iimpahla nge-100% ngesiqinisekiso sexesha.
Sinikezela ngeyure ezingama-24 ngenkxaso yezobuchwephesha kunye nenkonzo ekwi-intanethi Ngenxa yokuba sineqela lethu le-R & D, ukuba ufuna uncedo kwicandelo lobugcisa, sinokukunika uncedo. Ukuba unemibuzo emva kokuthenga nayiphi na imveliso, nceda ungathandabuzi ukusishiya umyalezo. Siza kuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza emva kokujonga.